फेसबुकमा यस्तो परिवर्तन, हेर्नुहोस् के के हुँदैछ ?
फेसबुकले ४ वर्षपछि आफ्नो साइटमा रहेको ट्रेण्डिङ न्यूज फिचर बन्द गर्दैछ । फेसबुकका एकजना अधिकारीले सञ्चार माध्यमहरुलाई बताए अनुुसार यो फिचर निकै पूरानो भएको र मानिसहरुबीच खासै लोकप्रिय पनि नभएको हुँदा बन्द गर्न थालिएको हो । उनका अनुसार ट्रेण्डिङ फिचरको विदाइसँगै फेसबुकले एक अर्को नयाँ फिचरको परीक्षण पनि गरिरहेको छ । समाचार अनुसार अब फेसबुकले […]
थाहा पाउनुहोस स्मार्टफोनका रोचक तथ्य
मोबाईल फोन विश्वभरका मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको छ । अहिले मोबाईल फोन गर्नको लागि मात्रै नभई अन्य धेरै कामको लागि प्रयोग हुन्छ । तस्वीर खिच्न, सामाजिक संञ्जालमा जोडिन, नक्सा हेर्न, अध्ययन गर्न, व्यापार गर्न पनि मोबाईल फोन प्रयोग हुन्छ । मोबाईल फोनको यही बहुउपयोगीताका कारण यसको प्रयोग दिनानुदिन बढीरहेको छ । मोबाईल फोनले मानिसको जीवनलाई थप […]
काठमाडाै‌, २० जेठ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले आज थापाथली चोकमा सवारीसाधनको प्रदूषणको छड्के चेकजाँच गरेका छन् । विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत आज मन्त्रीद्वय सडकमै पुगेर प्रदूषण चेकजाँचमा सहभागी भएका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर […]
बन्द भएको ल्यापटपबाट पिन हुन्छ माेवाइल चार्ज
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । के तपार्इंलाई लामो यात्रामा मोबाइलमा चार्जर सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ । यात्रा गर्दा ल्यापट बोक्नु हुन्छ भने मोबाइल चार्ज गर्न सहज हुन्छ । त्यो पनि ल्यापटप बन्द भएको अवस्थामा समेत मोबाइल डिभाइस चार्ज गर्न मिलेपछि छुट्टै मज्जा । प्रायः यो विधि स्लिप मोड (Sleep Mode) मा अधिकांश ल्यापटपमा काम लाग्छ । […]
काठमाडौं, १७ वैशाख- सरकारले गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका तथा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका मोबाइल सेट नचल्ने बनाउने भएको छ । अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटले सरकारको राजस्व छल्नेदेखि आपराधिक गतिविधिसमेत बढाएको भन्दै सरकारले नियन्त्रणका लागि मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । केही दिनअघि बसेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले त्यसका लागि […]
Posted in पत्रपत्रीकाबाट,बिज्ञान-प्रबिधि,मुख्य समाचार Read More »
बीबीसी, लन्डन — बेलायत सरकारले इस्लामिक स्टेट (आईएस) लगायतका चरमपन्थीका अनलाइन दुष्प्रचार पहिचान गरी रोक्ने सफ्टवेयर निर्माण गरेको जनाएको छ । बेलायती गृहमन्त्री अम्बेर रुढले कानुनअनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूले उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने संकेत गरिन् । रुढ यसैसाता सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूसँग यसबारे छलफल गर्न अमेरिका पुगेकी छन् । साथै भ्रमणका क्रममा आतंकवादलाई रोक्नका लागि आवश्यक अन्य कदमबारे पनि […]
Posted in अन्तराष्ट्रिय,बिज्ञान-प्रबिधि,मुख्य समाचार Read More »
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । […]
चीन- चिनियाँ प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन सक्ने विशेष चश्मा प्रयोगमा ल्याएको छ। उक्त चश्मा अपराधी पहिचानका लागि प्रभावकारी हुने प्रहरीले दावी गरेको छ। यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याइसकेपछि मानव तस्करी र ‘हिट एन्ड रन’सँग सम्बन्धित सात आरोपीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चिनियाँ नयाँ वर्षका लागि चीनले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। ‘अपराधीमाथि नजर राख्न विशेष […]
किन गर्यो चिनले एकै दिन १३ हजारभन्दा बढी वेभसाइटलाई बन्द ?
काठमाडौं, ९ पुस । चीनमा सञ्चालनमा रहेका १३ हजार भन्दा वढि वेभसाईटलाई सरकारले एकै दिन बन्द गराइदिएको छ । वेभसाइटहरुले अवैधानिकरुपले काम गरिरहेको चिनको आरोप छ । उसले सञ्चालन हुँदै आएका १३ हजारभन्दा बढी वेभसाइटलाई बन्द गरिदिएको जनाइएको छ । चिनियाँ संसद्को स्थायी समितिका एकजना उपाध्यक्ष वाङ सेन्ङजुनले सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म १३ हजारभन्दा बढी […]
‘क्यान इन्फोटेक’ ११ माघदेखि, विद्यार्थीहरुलाई भने ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं, २ पुस क्यान महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको ‘क्यान इन्फोटेक’ यो वर्ष ११ माघदेखि हुने भएको छ ।सुबिसु केबल नेट प्रा.लिको शीर्ष प्रायोजनमा क्यान इन्फोटेकको २४ औं संस्करण भृकुटीमण्डप काठमाडौंमा हुनेछ । ११ माघमा शुरु भएको मेला १६ माघसम्म चल्ने आयोजक क्यान महासंघले जनाएको छ । छ दिनसम्म चल्ने मेलामा सूचना र सञ्चार […]